प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १२, २०७६ समय: ६:०८:४०
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ । हे ! अगस्त्य मुनि ! हिमालयका उत्तरपट्टि रहेको मानसरोवरमा महादेव राजहंसका राजाभई असङ्ख्य हाँसका बथान साथमा लिएर जलक्रीडा गरिरहनु भएको थियो । त्यसै बखतमा विष्णुलाई साह्रै बेग गरी अकस्मात् आएको देखी ‘हे विष्णु ! यस्तो बेगसित किन आउनुभएको ? तपाईंलाई कुन कुराको दुःखकष्ट आइपर्यो ?’ भनी करुणावतार महादेवबाट आज्ञा भयो । भगवान् विष्णु पनि हतारसाथ गरुडबाट ओर्ली महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम गरी जालन्धरले पार्वतीलाई छल्न कैलाशमा गएको वृत्तान्त सुनाउनुभयो र ‘हजुर झट्टै कैलाश सवारी होस्, म त्यो जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म डगाई आउँछु’ भनी बिन्ती गर्नुभयो । महादेवले विष्णुको कुरा सुनी राजहंसको रूपलाई छोडेर आफ्नो रूप लिई क्रोधले राताराता आँखा पारी भन्नुभयो – ‘हे विष्णु ! म अब कैलाशमा जान्छु, तपाईं जालन्धरका घरमा गई त्यसकी पत्नी वृन्दाको धर्म डगाई आउनुहोस् । म त्यो पापी जालन्धरलाई नमारी छोड्ने छैन’ यति भनी क्रोधले युक्त भई पाखुरा निमोठी त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभई कैलाशमा पुगी पार्वती लुकिरहेको ठाउँमा जानुभयो । महादेव आउनुभएको देखेपछि स्वामीका पाउ धोई ढोगेर पार्वतीले जालन्धर आएको वृत्तान्त सुनाउनुभयो ।
सबै कुरा सुनी सकेपछि महादेवले ‘हे पार्वती ! त्यो दुष्टकी स्त्री वृन्दाको सत्य डगाउन विष्णु जानुभएको छ । विष्णु आउनासाथ युद्ध गरी म त्यो जालन्धरलाई मारुँला’ भन्नुभयो । त्यसपछि भवानी र शङ्कर कैलाशमा आनन्दपूर्वक रहन लाग्नुभयो । हे अगस्त्य मुनि ! मानसरोवरबाट महादेवसित विदा भई जानुभएका विष्णु जालन्धरको भेष लिई अन्तःपुरमा जानुभयो । वृन्दाले पनि जालन्धर रूपधारी विष्णु आएको देखी स्वामी आइपुग्नुभयो भनी ढोकामा आई, पाउ धोइदिएर भित्र कोठामा लगी भन्न लागिन् – ‘हे स्वामी ! पार्वतीलाई छल गर्न भनी जानुभएथ्यो, सो के भयो ? अनि मभन्दा पार्वती कत्तिकी राम्री लाग्यो ?’ वृन्दाको कुरा सुनेर जालन्धररूपी विष्णुले भन्नुभयो – ‘हे वृन्दे ! पार्वतीलाई छल गर्न नसकिने रहेछ । किनकि पार्वतीको घरभित्र जाने ढोकाका द्वारेहरूले को आयो ? कस्तो आयो ? पहिले नै चिन्दा रहेछन् । मैले पनि ती घोरमूर्ति द्वारपाललाई देख्दै डराएर त्यहींबाट नै फर्किएँ ।’ जालन्धर भेषधारी विष्णुको त्यो कुरा सुनेर वृन्दाले शङ्का गरी ‘यी मेरा पति होइनन् । अवश्य नै यो कुनै अर्कोले मलाई छल गर्न आएको हो’ भनी ध्यानदृष्टिले विचार गरेर हेरिन् र ‘विष्णुले जालन्धरको रूप लिई छल गर्न आएको’ प्रष्ट बुझिन् । अब मैले कुनै युक्ति गर्नुपर्यो भनी हाउभाउ र कटाक्षद्वारा विष्णुलाई वशमा गराई भन्न लागिन् – ‘हे स्वामी ! म एउटा कुरा भन्छु, तपाईं मान्नुहुन्छ ?’ वृन्दाको कुरा सुनी विष्णुले पनि ‘तिमीले जे भन्छ्यौ, म अवश्य मान्नेछु’ भनी वाचा गर्नुभयो । अनि वृन्दाले ‘म फर्केर नआएसम्म यहीँ बसिरहनुहोला’ भनी ढोका थुनेर आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहिन् । वृन्दा आज आउलिन्, भरे आउलिन् भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै चारदिन बितेर गए । तैपनि नआउँदा वाचामा हारेका विष्णु विवश भएर त्यो कोठामा बसिरहे । यता कैलाशमा महादेवले विष्णु फर्केर नआएकोले ध्यानदृष्टिले विचार गर्नुभयो र पार्वतीसित ‘हे पार्वती ! वृन्दालाई छल्न जानुभएका विष्णुलाई ता वृन्दाले नै पो छलेर कोठामा थुनी राखेको रहेछ । अब छुटाएर ल्याउँछु’ भनी मायाद्वारा सोह्रवर्ष उमेरको एक अति राम्रो युवावयको भिक्षु सृष्टि गरी ‘वृन्दाले कोठाभित्र थुनेर राखेका विष्णुलाई भिक्षामा मागी ल्याऊ’ भनी आज्ञा भयो ।